Agaasimaha Guud Ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshadda Iyo Qoyska Soomaliland Mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan Ayaa manta shir gudoomiyay shirka bilaha ah Ee ay wada qaataan haayaddaha ay wasaaradda wada shaqeeyaan waxaana lagaga dooda waxyaabihii la qabtay bishii lasoo dhaafay iyo qoryashaasa bilaha soo socda. – MESAF
News & Events News Agaasimaha Guud Ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshadda Iyo Qoyska Soomaliland Mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan Ayaa manta shir gudoomiyay shirka bilaha ah Ee ay wada qaataan haayaddaha ay wasaaradda wada shaqeeyaan waxaana lagaga dooda waxyaabihii la qabtay bishii lasoo dhaafay iyo qoryashaasa bilaha soo socda.
Agaasimaha Guud Ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshadda Iyo Qoyska Soomaliland Mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan Ayaa manta shir gudoomiyay shirka bilaha ah Ee ay wada qaataan haayaddaha ay wasaaradda wada shaqeeyaan waxaana lagaga dooda waxyaabihii la qabtay bishii lasoo dhaafay iyo qoryashaasa bilaha soo socda .
Shirkaaso diiradda lagu saaro tacadiyadda kadhanka ah haweenka iyo guud ahaanba halka uu marayo dadaaladda lagu cidhib tiraayo dhibaatooyinka haweenka lagula kaco.
Kulankaasa dhanka kale layskaga xaal waraystaa qaababka loogu adeegay dhibanayaasha la kulma tacadiyaadka kadhanka ah haweenka.